Shikhar Post » माप्य–खुम्बु मितेरी पुलको शिलान्यास हुँदै, यसरी बन्दैछ पुल !
माप्य–खुम्बु मितेरी पुलको शिलान्यास हुँदै, यसरी बन्दैछ पुल !
काठमाडौं, १२ मंसिर । माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको गौरबको आयोजना माप्य–खुम्बु मितेरी (ओर्लाङघाट) मोटरेबल पुलको भोली शिलान्यास हुँदैछ । गाउँपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हेमकुमार राईले उक्त पुलको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारी, जिल्लाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, सम्बन्धित सरोकारवाला तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहने जनाइएको छ ।
मोटरेबल पुल बनेपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको यातायात सेवा सहज रुपमा सुचारु हुने भएकाले यसले राष्ट्रिय महत्व बोकेको छ । तथापी, चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा गाउँपालिकाले उक्त मोटरेबल पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गाउँपालिकाले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा यो पुल निर्माण गर्न लागेको हो । ४८ मिटर लामो र ५० टन क्षमताको उक्त पुलको नाम नै माप्य–खुम्बु मितेरी पुल भनेर नामारण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत उक्तपुलका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको टेण्डर भएर निर्माण कार्य अघि बढाइएको उक्त पुल निर्माणका लागि संघीय सांसदमार्फत १ करोड, प्रदेश सरकारबाट २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने बाँकी रकम माप्य दुधकोशी र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाबाट ५०/५० प्रतिशत हिस्सा बजेटको व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ ।
पुल बनेपछि यस क्षेत्रको सम्बृद्धिको थप ढोका खुल्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई बताउनुहुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राईले यो पुल निर्माण गर्नका लागि ढुवानीको काम छिट्टै सुरु हुने शिखरपोष्टलाई जानकारी दिनुभयो ।
Solukhumbu ma ramro bikas hudai xa bestarai